QM oo sheegtay in dad ku dhaw haaf milyan ay ku dhinteen colaada Suuriya. | Dayniile.com
Home Warkii QM oo sheegtay in dad ku dhaw haaf milyan ay ku dhinteen...
QM oo sheegtay in dad ku dhaw haaf milyan ay ku dhinteen colaada Suuriya.
-Falanqay ay qaramada Midoobey ku sameysay dilalka diiwaangashan ee dagaalka 10-sano ka socda dalka Suuriya ayaa lagu ogaaday in qiyaastii 350,000 oo qof oo rayid ah la dilay intii u dhaxaysay bishii March 2011 oo ku aaddan markii ay qarxeen qalelaasaha dadlkaas iyo March ee sanadkan.
Previous article4 ruux oo rayid Falastiiniyiin ah ku geeriyootay weerar ay ciidamada Yahuudu ku qaadeen magaalooyinka Jeeniin iyo Qudus
Next articleMadaxweyne Deni oo qaabilay guddiga Kootada Haweenka ee Baarlamaanka Soomaaliya
Maxkamadda Gobolkani Banaadir ayaa xukun ku ridday milkiilaha Hey’adda Sahan Reseach, kadib dambi lagu helay isaga iyo hay’addiisaba. Matt Brydan oo ah milkiilaha Hey’adda Sahan...
Qaramada Midoobay oo wax laga Xumaado ku tilmaantay barakicinta qasabka oo...